Impilo, Anti Ubudala
Ubani phakathi kwethu ongafuni ukuba baphile phakade, noma okungenani isikhathi eside kakhulu? It kuvela ukuthi ezinye izinhlobo zokusebenzelana ukuphila kwakuthiwa ikwazi ukwenza kanjalo ngoba nethuba kabusha kangakanani ezitokisini zabo. Ngeshwa, lokhu kungaphezu samakhono abantu.
Ucwaningo olusha kuletha ezinye ngokoqobo ukuze amaphupho ethu ukungafi. Ngokusho isihloko e "Medicine Zokuzivikela" iphephabhuku, iqembu kusukela Brigham Young University wathola indlela ongaziwa ukuguga.
Futhi iminyaka yangempela yemvelo
Ubudala lomuntu, eqinisweni, kunqunywa ukuthi mingaki iminyaka wayephile, okuyinto kuyazwakala, kodwa amangqamuzana amehlo ethu okuthiwa lokho akusho ukuthi ikhula ngendlela efanayo. Uma indoda kuholela yokuphila okungenamsoco, isimo esitokisini sakhe liwohloka ngokushesha kunaleyo enamathela izincomo odokotela uthanda enempilo ukudla, ukuvivinya umzimba nokuphumula akanayo imikhuba emibi, isibonelo, uyenqaba utshwala nogwayi. Ngeshwa, lokhu kuyiqiniso, nakuba ingase ukujabulisa bonke abantu.
Njengoba sazi lokhu, ayoba mancane amathuba okuba othile ukuba abe Imiphumela ukumangala isifundo esisha ukuthi usebenzise ivumela amaseli ethu ubudala kancane kuka babephanga ngenye indlela. Ngo abadala ikakhulukazi abenza ephezulu umfutho umsebenzi, ezifana ukugijima imizuzu engu-30-40 izinsuku ezinhlanu ngesonto, ukubambezela yonke ukuguga amaseli wabo iminyaka eyisishiyagalolunye.
Telomere kube inkomba yokuthi cell ukuguga
Lo mphumela lihlotshaniswa telomere ezitokisini zethu - amaprotheni, esisodwa ekupheleni chromosome ngayinye. Njalo isibalo sokuhlukanisa amaseli yalezi amaprotheni kuyehla. Futhi kwaba yilapho ziya onomfutho, kulapho siguga.
Esifundweni entsha, abacwaningi ihlaziye idatha kusuka izifundo 5823 omdala owaba nengxenye Ukuhlola Centre for Disease Control and Prevention. Ngaphezu kwalokho eziningi nezinye izinto, abacwaningi eqoshiwe ubude telomere of bonke ababambiqhaza, kanye idatha mayelana yokuphila kwabo.
Ososayensi baye bathola ukuthi ama-telomere emifushane - futhi, ngakho-ke, izimpawu esikhulu kunazo zonke sokuguga kwamangqamuzana - babephakathi kwalabo babe umzimba. Abantu abakhetha umsebenzi okukhulu, ama-telomere ende futhi abasha atholakele.
Ngeshwa, umehluko omkhulu kungalindeleka kuphela uma unamathela ezingeni sasivumela sina lokuzivivinya. Uma ucabanga ungakwazi ukubambezela yonke ukuguga cishe iminyaka engu-10, ngenxa ukuhamba okusheshayo izitolo noma ube ride bike esifushane, uyikhohlwa: ososayensi abuthole kokungafani okukhulu e telomere obuphelele phakathi abantu ongaphakeme uphinde ungamele umfutho umsebenzi nalabo futhi zonke uthanda ukwenza lutho.
Nakuba lo mshini usosayensi telomere ukulondolozwa engaziwa Basikisela ukuthi ukuvivinya umzimba suppresses ukuvuvukala ukungalingani kwamakhemikhali ezingalimaza lezi amaprotheni.
Yisiphi isiphetho esingayenza? Uma ufuna ngangokunokwenzeka ukuhlehlisa umhlalaphansi wabo, kufanele ujuluke.
Ososayensi baye basungula polymer ukuthi ungasusa okwesikhashana imibimbi
Kanjani ukuphila ngenjabulo iminyaka engu-100: izimfihlo eyikhulu Okinawa
Indlela ukuhlanza cat ezindlebeni, angithi? Indlela ukuhlanza ezindlebeni Goba?
Ukwakhiwa "A" ukuze "Z": Umsebenzi geodetic